प्रधानमन्त्रीलाई उनकैै कार्यकर्ताकाे खुल्ला पत्र – Nepaliko Aawaj
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक १०, २०७६ | ८:४६:१४
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी अाेली
तपाईकाे बाेलीमा रहेकाे दम, तपाईले र प्रचण्डले जनताकाअघि गरेकाे प्रतिबद्धताका कारण गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले याे अाकारकाे जीत सम्मानका साथ प्राप्त गरेकाे हाे । तपाईकाे नेतृत्वमा सरकार बन्याे, एमाले र माअाेवादी पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) बन्याे । अाम कार्यकर्ता र जनतामा एक किसिमकाे उल्लास देखियाे । अब केही रचनात्मक काम हुन्छ भन्ने कुरामा विपक्षीहरूले समेत विमति जनाइहाल्न सकेनन् । यसकाे कारण अब नेकपाकाे सरकारले केही अवश्य गर्छ भन्ने विश्वास नै हाे ।
कुरा धेरै भए । तिनै कुराहरूमा अल्झेर हाेला कामले गतिलिन सकेन । सरकारकाे अालाेचना कसैले गर्नासाथ काङ्ग्रेसले पाे के गरेकाे थियाे र भन्ने ठाेसे जवाफ लेख्ने र बाेल्नेहरू नै सरकारका अाफन्ती बने । याे सरकारलाई न त पञ्चायतकाे वेलाकाे न त काङ्ग्रेसकाे सरकारसँग दाज्न मिल्छ । त्याे व्यवस्था र त्यतिवेलाका शासकहरू भएनन् भनेर हामीले गणतन्त्र ल्यायाैं र अन्त्यमा कम्युनिष्टहरू निष्ठावान हुन्छन् भनेर जनताले दुईतिहाई नजिककाे बहुमत दिएकाे हाे ।
याे सरकारले संविधान कार्यान्वयनकाे महत्वपूर्ण काम गर्याे । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने, अावश्यक ऐनकानुन बनाउने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण काम गर्याे । तर जनता अाफ्नाे राेटीकाे स्वाद, सुरक्षित वासकाे व्यवस्था र लाज र जाडाेबाट बच्नका लागि अाफूले कपास पाइयाे वा पाइएन भनेर हेर्नेरहेछ ।
विरामीकाे उपचार, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा भयाे वा भएन भनेर पनि शाेच्दा रहेछन् ।
केही बाटाहरू बनेका छन् । केही बन्दैछन् । पुलपुलेसाहरू बन्दैछन् । लाेडसेडिङकाे समस्या धेरैहदसम्म समाधान भएकाे छ । भारतबाट पेट्रेलियम पदार्थ अमलेखगञ्जसम्म पाइपबाटै अाउन थाल्याे । यी राम्रा कामहरू हुन् । यसका लागि धन्यवाद !
हराएकाे सुन भेटिएन । सुनचाेरहरूलाई क्लिनचिट दिने हाेडमा न्यायालयहरूकाे तँछाडमछाड छ । निर्मला काण्डमा नराम्ररी फस्याे सरकार । भँगेरा खालका घुसलिने कर्मचारीहरू पक्राउ परे भनिन्छ तर गिद्ध खालका भ्रष्टाचारीहरू सिंहदरवार वरिपरि घुमिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । संसदीय समितिले कार्वाहीका लागि सिफारिस गरिएका अभियुक्तहरू समितिलाई धम्क्याउने हैसियतमा छन् । के प्रधानमन्त्रीले वा सरकारले चाहेमा भ्रष्टहरूलाई ठेगान लगाउन सक्दैन ? सकिन्छ । तर किन तिनीहरू छाडा छन् त ? के सरकारकाे साझेदारी छ त्यहाँ ? छैन भने यति शक्तिशाली सरकार अनि भ्रष्टाचारका विरूद्ध शुन्य सहनशीलता भन्ने प्रधानमन्त्री किन सक्रिय बन्नुहुन्न ?
अझ मेडिकल शिक्षाकाे क्षेत्र हेर्दा त यति लज्जावाेध हुन्छ कि, एउटा ठग साेझै बाेल्छ हामी शिक्षामन्त्री हटाइदिन्छाैं ।
एउटा सामान्य गाएकले गाएकाे गीतका शब्दका विषयमा प्रतिक्रिया दिनसक्ने प्रधानमन्त्री स्वयम् अाफ्नै नेतृत्वकाे सरकारले नियमानुसार ताेकिदिएकाे फिभन्दा १२/१५ लाख बढी लिने र त्याे पनि बिनारसिद पैसा लिने देश र जनतामारा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई किन केही गर्न सक्नुहुन्न ? जाे ठगीमा मुछिएकाे छ, जाे भ्रष्टाचारमा डुबेकाे छ, जाे ठेक्कापट्टा काण्डमा डुबेकाे छ यस्तैयस्तालाई लिएर जनताले देख्नेगरी हिँड्दा यसले दिने सन्देश के हुन्छ ?
अहिले म चिकित्सा शिक्षाकाे क्षेत्रमा चलेकाे ब्रम्हलूटका बारेमा कुरा उठाउँदै छु । याे शिक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री अनि झारपात सांसदहरूले के बाेल्छन् हामीलाई मतलव छैन हामीलाई केपी र प्रचण्डले पनि केही गर्दैनन् । यी छुसीहरूले निहुँ खाेजे भने केपी र प्रचण्ड लगाएर यिनीहरूकाे जागिर खाइदिन्छाै हामी भन्दै हिँडेका छन् मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू । विद्यार्थी सङ्गठनहरू कति ससाना अन्यायका बिरूद्धमा पनि न्यायकाे पक्षमा अान्दाेलन गर्थे तर अहिले भ्रष्टहरू उनीहरूसँग डराउँदैनन् किन ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई नेकपाकाे केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अनि तपाईकाे जिल्ला पार्टीलाई जनतामाराहरूकाे विरूद्दमा जनतासँग हिँड भन्न किन तयार हुनुहुन्न ?
अहिले मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू अाफूमाथि नियमकानुन लाग्ने हाे भनें अब हामी नयाँ भर्ना लिन्नाैं भनेर घुर्की लगाइरहेका छन् । अधिकांस मेडिकलकलेजका फेकल्टी हेडहरू र अरू प्राध्यापक चिकित्सकहरू राज्यले लिएर चलाउने हाे भने हामी सहयाेग गर्छाैं भन्नुहुन्छ । यसकाे कारण लगानीकर्ताहरू एकदुईजनालाई विशेष सुविधा दिने बाँकीलाई सरकारी तलवकाे अाधा पनि नदिई काम लगाउने निकृष्ट गतिविधि हाे ।
अब जुनजुन मेडिकल कलेज नयाँ भर्ना लिन्न भनेर भन्छन् तिनीहरूले यसअघि विद्यार्थीबाट सरकारले ताेकिदिएभन्दा बढी लिएकाे पैसा कटाएर उनीहरूकाे सम्पत्तिकाे उचित मूल्याङ्कन गरी राज्यले लिने र चलाउने गर्नुपर्छ । कतिपय मेडिकल कलेजले त स्थानीय नेताहरूलाई प्रभावमा लिएर सरकारी स्कुल र अस्पतालकाे जग्गा भाडाकाे नाममा सित्तैमा जसरी लिएर कमाउधन्दा चलाएका छन् । यिनलाई राज्यले लिन कुनै समस्या छैन । ठगेकाे पैसा फिर्ता गराउने र ठगहरूलाई जेल पठाउने काम शुरू गर्न नसक्ने हाे भने सर्वसाधारणले पनि भन्नसक्छ यसखालका अपराधमा पार्टीका ठुला नेताहरू, मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि सामेल हुनुपर्छ । मलाई यसमा विश्वास छैन तर माफियाहरू खुलम्खुल्ला हिँड्ने, ठगिएका विद्यार्थीहरू पुलिसबाट पिटिने, छात्राबासमै सञ्चालकका गुण्डाहरूबाट पिटिने, सरकार हाम्राे सुरक्षा गर भनेर नारा लगाउँदै हिड्नुपर्ने तर कतैबाट पनि ती पिडित विद्यार्थीहरूकाे पक्षमा साथ र सहयाेग मिल्दैन भने एकपटक सबै न्यायप्रेमीहरू अन्यायका विरूद्धमा अागाे बनेर निस्कनुपर्छ ।
सम्माननीय प्रधामन्त्री केपी अाेली मेडिकल माफियाहरूले चलाएकाे याे ठगीका विषयमा किन तपाईकाे सचिवालय बाेल्दैन ? अझ सरकारका प्रवक्ता जाेसँग बाेलेरै मान्छेलाई ठाउँकाे ठाउँ तह लगाइदिनसक्ने क्षमता छ उहाँ किन बाेल्नसक्नुहुन् ?
एउटा गाएकले ले ले गाँजा ले गाउँदा च्याप्प पार्ने पुलिस अाज कहाँ छ ? ४२ लाख पचासहजार भन्छ सरकार तर हामीसँग ६० लाख लिइयाे भन्दै फाइल बाेकेर हिड्ने विद्यार्थीहरूकाे बचाउका लागि ठगहरू समात्न किन हिच्किचाहट ? के छाेराछारी सित्तैमा पढ्छन् ? हाेइन भने यसरी लुट धन्दामा लागेकाहरूलाई तत्काल समात ।
रसिद नकाटी उठाइएकाे कराेडाैं रूपियाकाे कर राज्यलाई तिर्दैनन् यिनीहरू ।
अाफ्ना सेयर हाेल्डरलाई भने सरकारले ताेकिदिएकाेभन्दा पनि कम लिइएकाे भनेर पनि ठग्दा रहेछन् । मैले मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका लगानी कर्ताहरूसँग बढी पैसा लिएकाे प्रमाण देखाइदिँदा जिब्राे टाेके ।
त्यसैले कार्तिक अठार गतेभित्र विद्यार्थीसँग लिएकाे बढी पैसा फिर्ता गर्ने सहमति भएकाे छ चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग चितवनका सिडियाेकाे उपस्थितिमा । छिटाेभन्दा छिटाे विद्यार्थीलाई न्याय दिइयाेस् र राज्यकाे नीतिनियम नमानी मनाेमानी गर्ने मेडिकल कलेजहरूमाथि कार्वाही गरियाेस् ।
तपाईकाे नेतृत्वमा सरकारले राम्राे गरेकाे हेर्न इच्छुक तपाईकाे पार्टीकाे सदस्य :